Top 15 New Game Apps for Windows Phone Xaqa Hadda
Mobile ciyaaraha weligii sida xiiso leh sida ay hadda u isticmaala Windows Phone - kaliya ma ahan sababtoo ah telefoonada Windows-socon weyn, laakiin sidoo kale sababta oo ah barnaamijyadooda kulan badan oo la heli karo iyaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira barkad kulan wanaagsan iyo kuwa xun laga heli karo. Si loo tashiilo waqtiga ku murmin xaalkooda haddii kulan waa weyn yahay, hubi liiska barnaamijyadooda ciyaarta cusub ee Windows Phone naga hadda.
1. Plant vs. Zombies
Halkii Knights Dr Makumbe iyo ilaalada sci-fi, taasi ciyaarta difaaca munaaraddii qoreysa Ereyada kartoon cute iyo jilayaal undead. Waxaa dhigeysa wareejin ah oo casri ah si ay u category ciyaarta classic. Ujeeddada cayaarta waxa ay tahay in la ilaaliyo xoogan yihiin iyadoo la abuurayo weerar iyo derbi daafaca dhirta in la baabi'iyo zombies. In kasta oo ay u saftay doqon, dhirta vs. Zombies waa wax la qabatimo oo kuu ogolaanaya in aad ku tababarato xirfadahaaga qorshaynta istaraatiijiyada.
Tani qabsado oo kulan tirada xujo haatan lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah. Ujeedada Threes! waa in ay isu barbar tiro badan oo ka hor guddiga uu noqonayaa mid aad u buuq badan. Marka aadiyo, tirada ka dusiyeen sabuuradda laab. Nadiifi guddiga sida ugu dhakhsaha badan aad karayso!
3. Troopers yaryar oo 2: dhiira gelin ah
Kulankaan ayaa wuxuu ka kooban yahay saddex hawlgallada howlgal gaar ah dhiirrigelin meesha aad tijaabin kartaa in aad go'aan iyo awood si ay u buuxiyaan. U bood on Humvee ah iyo ninka .50 heerkiisa munaarad-qori si ay u horseedi troopers si aad u guul. Troopers yaryar oo 2: dhiira gelin ah waxaa taageera Madaxweyne Siilaanyo Oo Live oo aad ka heli karo 20-kulan guulaha Madaxweyne Siilaanyo.
4. Asphalt 8: hawada
Raadinta kulan tartanka u fiican tahay Windows Phone? Asphalt 8: hawada bixiya muuqaallo aan caadi ahayn oo saakay cajiib ah ciyaar mobile. Waxaad xaqiiqo ah ka heli doontaa waayo-aragnimo tartanka Arcade-style ah meel kasta oo aad ku kulankaan! Wixii khibrad fiican, waxaa la ciyaaro casriga ah ee la baaray ka weyn.
5. Cow Evolution
Tani kulan cajiib ah waa kharriba markii aad marka ma dareemaan sida wax soo saar leh ee aad ka dhimo. Way isbaddali lo'da caadi galay Lahjadaha qaadheen kala duwan - sac bahal, lo'da alpaca, lo'da shisheeye iwm Abuur sac oo dheeraad ah qaadheen si ay u ahaan umuuruhu daaqsinta ah oo faa'iido dheeraad ah oo ay goolal dhibcaha ugu badan ee ciyaarta.
Ugu dambeyntii! Kulankaan oo caan ah oo la qabatimo hadda diyaar u ah Windows Phone. Abuur, sahamin iyo badbaadaan qarxeen zombies nocturnal ee adduun kasaarka kala sooc lahayn ahbaa. Waxa ay maamushaa si fiican on Phone Windows ah in aad la mar walba ciyaari doona kulan cajiib u ah oo ku saabsan iyada oo aanay jirin qalab kale.
Tani waa ciyaar istaraatijiyad laga cabsado - waxaad u baahan tahay si ay u caawiyaan maareeyaan khayraadka si loo ogaado jiritaanka tartanka aadanaha. Ujeedada kulankan waa in la helo dhagaxyo tamarta ee dhulka moolkiisa adigoo isticmaalaya robot ah bio-farsamo Nep2no. La dagaallama cuf iyo falgali gudcurka ku xeeran si ay u helaan dhagaxyadan.
8. Storm Rush
Storm Rush waa kulan weyn, kuwa fudud baad u daaleysaa kulan mobile - waa ay fududahay, laakiin ay adag tahay in sayidkiisa. Waxaa dhab ahaan u ku imtixaamaa xawaaraha iyo ka-fiirsashada la, gameplay adrenaline-shiday dhaqso badneyd iyo muuqaallada la yaab leh. Iska ilaali munaaradaha oo iftiimay by Guuritaanka bidix ama midig, ama mid ka baabbi'in si aad u aragto qarxi qurux badan oo midabo.
9. Belaayadii Inc.
Belaayadii Inc. waa istuuray weyn oo ciyaarta istaraatijiyad in waxay caan ku tahay saxnaanta; US Center ee Xakamaynta Cudurada xitaa casuumay sameeysa in la siiyo hadal gudaha ah oo ku saabsan Tusaale cudurka! Play cilmiga Xumaanta kulankaan iyadoo la abuurayo oo isa soo taraysa pathogene dilaa ah oo dhibaatada ku haya Dadka. Waxaad u baahan doontaa in ay sidaa sameeyaan ay la socodka horumarka ee hadda ka jirta warshadaha ee caafimaad si aad u hubiso pathogene weli xoogan ka daawo kasta.
10. Target Dead: Zombie
Haddii aad raadinayso kulan Zombie scarier, isku day dhintay Target: Zombie kuwaas oo lo 'ah Santas Zombie iyo dhul wintery. Ciyaarta ayaa waxay leedahay sawiro cajiib ah iyo lacagta, mudda hubka customizable.
11. beydkiisa Adventure
Kulan xujo Tani waa sida la qabatimo sida Tetris. Ciyaarta oo aad u baahan tahay in ay maraan labo ka mid ah dhibco masuuuliyadaha guud ahaan beer ka buuxsamay caqabadaha bar-qaabeeya. Wareeji dhibcaha sida ay u waajahayaan carqaladahan in ay ka fogaadaan si loo hubiyo in dhibcaha aan "Dhibay" by ulaha gudban.
12. Dino bahalka: xayawaan qiroweyn Game
Noqo xayawaan qiroweyn ka muddada Jacka in Dino bahalka: xayawaan qiroweyn Game. Markii uu youngling ah, Dino hooyadii waxaa dilay sharta Tyrannosaurus Rex. Waxa uu haatan ku aarsatid geeridii hooyadiis. Buuxi dhammaan heerarka, soo ururin cunto iyo horumarinta awoodda Dino in ay isaga xoojiyaan ilaa waayo, dagaalka final!
13. Halo: Weerar Spartan
Tani waa marka hore qof ciyaarta ugu fiican ee waayo-aragnimo toogashada diyaar u Windows Phones. Sharraxaadda ee ciyaarta ayaa yaqaan version Madaxweyne Siilaanyo in uu la iibiyo sano ee lasoo dhaafay. Sidaas filan si ay u arkaan characters la yaqaan, xayawaan iyo deegaanka inta aad maraan caalamka ah sci-fi ordi.
Ubisoft modified Rayman Fiesta Run kooxda-scroller in ay taabto shay-si ay u habboon ciyaaraha mobile. Waxaa jira marxalado kala duwan in ay nadiifiso ay goob tallaabo ka buuxo iyo caqabado adag.
15. ul Cricket Premier League
Taageerayaasha Cricket jeclaan lahaa tan isboortiga ku salaysan ciyaarta mobile weyn. Ciyaarta waa u fududahay inuu u ciyaaro - sugi bowler ay u riixay kubada ka hor inta aad go'aansato in aad u weeraray bidixda ama midigta. Ha la soco in waqtiga aad u muhim ah sida nooca stroke in kulankaan.
Hadda oo aad qabto liiska kulan weyn u Windows Phones, tag dukaanka app, oo waxay u heshid telefoonada aad. Mar dambe ma aad u baahan doontaa inaad bidxeed ee ku dheygaga qofka aad ka soo horjeeda inta aad baska marka aad leedahay dhameysan aad buug!
Best 5 New Windows Phone ay tahayna in ay Soo 2015/2016
Facebook Rasuulka for Windows
Sida loo rogo ama Windows Movie Kan sameeyey Faylal ay si AVI
Sida loo celi Khasaaray Windows 7 Password
Sidee si toos ah u kaabta Hard Drive ee Windows XP
> Resource > Windows > Top 15 New Game Apps for Windows Phone Xaqa Hadda